people Nepal » माधव नेपालको खुलासा : प्रचण्डले ११ पटक फोन गरेर माफी मागे माधव नेपालको खुलासा : प्रचण्डले ११ पटक फोन गरेर माफी मागे – people Nepal
माधव नेपालको खुलासा : प्रचण्डले ११ पटक फोन गरेर माफी मागे
Posted on July 28, 2017 by Durga Panta
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै रोचक खुलासाहरु गरेका छन् । त्यसका केही अंशहरु ः
म प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रा केही साथीहरुले भन्नुभएको थियो तपाइँलार्इ माओवादीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार नगर्ने भए भनेर । नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्छन् । अवैधानिक हो भन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नबस्नुस् छोड्दा नै फाइदा हुन्छ पनि भने । मैले हेर्दै जानुस् प्रचण्ड र बाबुराम सँगसँगै बालुवाटार आउँछन् र मसँगै खाना खान्छन् भन्ने जवाफ फर्काएको थिएँ । उहाँहरुले फेरि भन्नुभयो सिंहदरबार त नछिर्ने भनेका छन्, बालुवाटार कसरी छिर्लान् ? मेले फेरि भने, यो हेर्दाहेर्दै हुन्छ । म देखाइदिन्छु भनेँ । आखिर देखाइदिएँ पनि । किनकि प्रचण्डसँगको मेरो दोस्ती कतिसम्म छ भन्ने मलाई थाहा थियो ।
मैले प्रचण्डलाई एउटा शब्द भनेको थिएँ । पुलिस छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यतिमात्र होइन, राज्यसँग सेना पनि छ । मलाई सेना परिचालनका लागि बाध्य नबनाउनुस् । प्रधानसेनापतिलाई सेना परिचालन गर्नुस भनेँ । परिचालनको पहिलो कदमको रुपमा राष्ट्रपतिको भवन वरिपरि प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबारको वरिपरि सेनालाई मार्चपास गराउन निर्देशन दिएँ । सेनाले मार्च पास पनि गरे । यो के गरेको भन्ने आयो, मैले भनेँ, यो पहिलो स्टेप हो । राज्य झुक्न थाल्ने हो भने, आठ लाख मान्छे ल्याएर प्रधानमन्त्री फालिदिन्छु भन्ने हो भने, त्यो कस्तो प्रधानमन्त्री हुन्छ ?
कपिलवस्तुमा हतियार बोकेर ट्रकमा हाइवेमा हिँड्नेलाई सशस्त्र प्रहरी लगाएर समायो, थुनियो, हतियार खोसियो । लगत्तै अनमिनका मान्छे उनीहरुको कुनै दोष छेन, किन समातियो भनेर पुगे । मैले अनमिनको कुरा सुनिनँ । उनीहरुलाई थुनिराख्न भनेँ । प्रचण्डजीले फोन गर्दै माधवजी ठूलो गल्ती भयो, हाम्रा साथीहरुले बुझेनन् । म जहाजबाट भैरहवा आउँदा स्वागत गर्न उनीहरु खाली हात आएका भए हुने हतियारसहित आएछन् । एकचोटिको गल्तीलाई माफ गर्दिनुहोस् । तर अनमिनले भन्छ उनीहरुको कुनै गल्ती छैन । त्यहीबोलादेखि अनमिनप्रति मेरो विश्वास रहेन र बिदा गर्नैपर्छ भन्ने सोचेँ । प्रचण्डजीले ११ पटक फोन गर्नुभयो । दोस्रो पटकदेखि यसरी भेटिए जे सजाय दिए पनि हुन्छ, यसपटक साथीहरुले गल्ती गरे भन्नुभयो ।
प्रचण्डजीले तपाईं राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, तर वास्तवमा परिस्थिति त्यस्तो (राजीनामाको) थिएन । खासमा म पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले दिक्क भइसकेको थिएँ । भित्रै स्थिति राम्रो छैन भने किन बस्ने ?
प्रचण्ड–केपी ओली सहमति
त्यो तीन बुँदामा जे जे सहमति भएको थियो, त्यो पालना गर्नुपथ्र्यो । जे भयो त्यो बेठिक भयो । प्रचण्डजीले पनि निकै हतार गर्नुभयो । हामीलाई पत्तै नदिई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पुग्नुभयो, त्यो गलत हो । मैले उहाँलाई भनेँ, हामीले भन्नुपर्दैनथ्यो ? हामी जिउँदै थियौँ त ? हामीबाट पनि पार नलागेको भए पार लागेन भन्थ्यौँ । त्यसपछि त्यो निर्णय लिन सक्नुहुन्थ्यो । तर त्यहाँ अलि हतार गर्नुभयो । प्रचण्डजीले सहमति पालना भएन, सहमति तोडियो भन्नुभयो । जे भएपनि सहमतिको पालना हुनुपथ्र्यो नभएर गलत भयो ।
संविधानको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना धकेल्ने प्रयास भयो : ओली